Ciidamo lagu magacaabo Alpha oo raadinaya Al Shabaab
Ciidamo lagu magacaabo Alpha oo raadinaya Al Shabaab	Last Updated on Monday, 04 June 2012 19:51	Monday, 04 June 2012 19:44	Ciidamo commandos ah oo si gaar ah loo tababaray wejigana u duubanyahay ayaa guri guri u galay deegaanka Ceelasha Biyaha. Waxaa la tilmaamay in ay Al Shabaab isku qarinayaan oo ku dhuumaaleysanayaan deegaankaas.
Waxay soo xireen oo soo qabqabteen rag badan oo lagu tuhunsanyahay in ay ka mid yihiin ciidamada Al Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya Shariif Sh. Axmed ayaa lagu sigay oo wadada loogu galay deegaanka Ceelasha Biyaha isbuucii hore waqti uu booqanayay magaalada Afgooye.
Ciidamadan sida gaarka ah u tababaran ayaa lagu soo daayay Ceelasha Biyaha. Ciidamada waxaa lagu magacaabaa Alpha Group. Waa ciidamo aanan wax badan laga aqoon. Waxaa si gaar ah loo ilaaliyaa in la ogaado shaqsiyaadka ku jira.